Ingxoxo enomdla kunye nomculi uJamalo
I, ngokungathandabuzeki, yaba yinto evulekileyo kakhulu kulo nyaka. Ubunzima kumncintiswano "I-Wave Wave" wanikeza iJamal ngomjikelezo omtsha wengoma yakhe yomculo. Umculi uhlala phi namhlanje? Sasincoko enomdla nomculi uJamala. Jamala, umsebenzi wakho waqala nge ... opera. Ndixelele ukuba kwakunjani.
Ekuqaleni umama wayethanda i-opera, ngoko wamenza wandithanda. (Uhleka.) Kutheni? Kungenxa yokuba xa ndisekholejini, andizange ndihlabelele ii-classical - ndandithanda kakhulu i-jazz. Kwaye kwakubonakala ngathi le mizobo mibini. Kodwa unyaka ngamnye umlomo wezemfundo wawuvulela kum indlela entsha. Ndandiqonda ukuba uyisiseko. Ukongeza, bekufuneka ukuba uqhubeke nokuphucula izandi ze-jazz, umzekelo, eMami. Apha akukho mntu onokumfundisa kum. Kodwa i-opera inakho.
Unjani uhlobo lomfundi?
Mhlawumbi, ndandibonakala ndingumntu ongenasiphelo, njengoko yaguqulwa esuka kumfundisi ukuya kutitshala. Kodwa ndandifuna nje "wam". Ndiyathokoza kukuba ekugqibeleni ndandithandana nabafundi beklasikhi. Emva kokugqiba kwakhe waphupha ukungena kwindawo yethu yokudlala yaseKiev. Kwanokuphicothwa. Kutheni ungadlulanga - andazi. Ngokuqinisekileyo, ukucaphukisa. Kodwa ndaye ndafumana i-jazz, eyabangela ukutshatyalaliswa kokwenqaba. Kodwa kwabangamashumi amane kwabantwana esiklasini nabo, nabo baphicothola ngaloo mini kwaye abazange baphumelele, kwaba yintlekele. Ukuphulaphula kwenzeka ehlobo, kwaye ngoSeptemba i-CD yam yafika kuLena Kolyadenko, owayesele sele egqibe ukudala umculo.
Ufike njani kwiCD yakho? Ngokutya kwakho?
Hayi, ayikho. Andiyazi ukuba wamfumana njani. Iinkwenkwezi, isithuba - nantoni na oyifunayo, biza. ULela wandibiza waza wanikela ukusebenzisana.
Kwaye ngubani okhupha ngcamango ukuya kwi "New Wave"?
Lene. Emva kokuba iqela laseKieb libukele umculo ngokuphindaphindiweyo, sasinomzuzwana. Kwaye kule pause Lena ucebise ukuba ndiye kwi "Wave".
Omnye ubona "iWew Wave" isiqalo esihle, umntu - ukhuphiswano lwesibini, engadlala indima ekhethekileyo ekuphuhlisweni komsebenzi womculi.
Kwaye lithini le mpikiswano?
Ngaphambi kohambo siye salinganisa yonke into. ULeela wandibuza ukuba ngaba ndiyazi ezinye iimincintiswano eziza kubakho ngokuyinhloko. Kwaye sinokumanyanisa sigqibo sokuba into efanelekileyo kakhulu yi "Volna". Ndenenhlanhla, kuba ngomnyaka wokuthatha inxaxheba kumncintiswano kwakungekho nabathathi-nxaxheba abangafunekiyo. Bonke abantu aba-16 bafanelekile abaculi kunye nabaqhubi.
"Ubuso" be-Jamala kwi-show-biz sele sele buqulunqwe ngokupheleleyo, okanye ngaba iphrojekthi iphinda iphuhliswe? Ewe, ubona ubuso phambi kwakho - nguwe! (Uhleka.), Kunoko, ngomfanekiso ...
Kulo kunye ne-chip - ukutshintsha imihla ngemihla kwaye ngexesha elifanayo uhlale uqobo. Oku kuyintloko yeJamala. Ingcamango yakhe eyintloko ngumculo, kwaye unako ukugqoka nayiphi na i-hairstyle okanye ingubo. Yintoni eyenzekayo emsebenzini wakho ngoku? Ngoku ndibhalela umculo kwaye ndifuna iingoma ezaneleyo ukuba ziqokelelwe apho ungakhetha khona inani elifanelekileyo le-albhamu. Ndifuna ukuba ibe yi-albhamu bonke abayithandayo. Akunjalo ngandlela yokuba uya kuthanda abakudala nabancinci, kodwa ukuba ngumculo ongunaphakade, ongayi kutyhala kwiminyaka embalwa okanye kwiminyaka embalwa. Uza kucula ngaluphi uhlobo? Andiyazi ukuba ungayifakela njani, kodwa ndicinga ukuba iya kuba ngumxube we-jazz, inkohlakalo, i-punk, izandi zogesi zanamhlanje ... Siceba ukusebenzisa izixhobo eziphilayo. Omnye wandibhalela kwinqonga: "Ewe, luhlobo oluthile lweJamala-jazz!" Mhlawumbi. Kwakhona akunakwenzeka ukuthetha ukuba yiyiphi indlela uBjork okanye i-Radiohead idlala ngayo.
Udla ngokuthelekiswa nomntu. Akucaphukisi?
Akakhubekisi. Ndibetha ukuba baqhathanise namvumi ahluke ngokupheleleyo. Ukuba ndinguye-umhlobo wabo bonke ndawonye, ​​ngoko ndiyodwa. Ewe, ngokwenene-ndifana neBjork, uZhanna Aguzarova, Amy Winehouse. Kwaye ngaba abahlukahlukeneyo abaculi.
Yintoni enye inika uvuyo olufana nomsebenzi wakho?
(Kucinga.) Akukho nto. Ukuba andiyi kucula, ndiza kubhala. Okanye ufunde izibongo. Kodwa ke - ukuba awuzange ucule, ke ... ... ndiza kuba ngumbindi wezilwanyana! Ndiyathanda izindlovu, i-rhinoceroses nazo zonke ezinye izilwanyana ezinkulu. Kubonakala kum ukuba ukuba bonke ubungakanani babo ababancedi kakhulu. Oku, kubangelwa ukuba kusebenza kubantu. Omkhulu umculi-mngcipheko kakhulu. Omnye uMichael Jackson. Kwakuyintlekele engqondweni. Ngaba unomntu othandekayo? Kukho umntu endiyithandayo, kodwa andinako ukumbiza ngokuthi uyamthanda. Kukho amantombazana abone indoda - kwaye konke, abakwazi ukuhlala ngaphandle kwakhe. Kwimi, ubudlelwane yinkqubo yokwazi. Yintoni umntu kufuneka abe yinto oyithandayo?
Unomdla kakhulu kwaye unomusa. Ndiyaqonda ukuba abantu bafumana kakhulu, kuba umntu oyinyani uyisondlo. Ibhinqa lingasebenzi. Kwaye akukho ngaphantsi kweemeko kufuneka umntu awe phantsi kwimeko yokulahleka. Kodwa ke ukuba oko kwenzeka, indoda yam ingafanele ibe nethemba. Mna, ngenene kwenzeka kwiindawo ezahlukeneyo, kwaye ndifuna inani labantu abangakwazi ukujika nayiphi na imeko kwiholide.
Yintoni engavumelekanga kuwe ubuhlobo?
(Kucinga.) Kunzima ukuthetha. Ukuba nantoni na iyandichukumisa xa ndiqhagamshelana, ndiyiyeka.
Ngaba ungomnye wala mabhinqa amancinci, osusebuntwaneni, ephupha ukutshata, egqoke ingubo emhlophe, ekhulisayo abantwana?
Hayi, ayikho. Andizange ndiphuphe oku. Ndiyamthanda abantwana, kodwa andikulungele ukuba ngumama. Omnye uziva ulungele ukuzala ngo-30, umntu-kwi-20. Ndisengumntwana, kungekho soloko ndixanduva, ndinokulibala into ethile, yishiye. Ndiyazi ukuba udade wakho naye ungumculi ... Ewe, kwaye ulungile kakhulu, waphumelela kwiklasi yokugcina i-post-graduate. Uhlala e-Istanbul. Kungekudala wazala intombi kwaye ngoku uhlala emnika yona. Kodwa uceba ukubuyela kumculo kwaye uqhubeke ukudlala i-dombra. Ungumdlali oyingqayizivele. Uthanda yonke into endiyenzayo. Ndandifunde ukuba "unokukhuliswa ngokusemgangathweni kwaseMpumalanga."
Yintoni eyayingavunyelwe kwizinto ozenzayo ezimbi?
Ndandifuna ukuya kuma-discos, kwiklasi yesithoba, kodwa abazange bandivumele. Kwakumnandi ukubukela ifilimu ngokuthandana, kodwa rhoqo, xa kuqalwe ukubanga, ndathunyelwa ukubeka i-kettle. Kodwa ndinombulelo ngokukhuliswa ngaloo ndlela. Emva kokushiya eneminyaka eyi-14 kwindlu yabazali bam eSimferopol, ndandisoloko ndiyazi ukuba kwakulungile nokuba yintoni embi.
Ngoobani abahlobo bakho?
Abantu abaqhelekileyo. Omnye umhlobo intombazana esasihlala kuyo ngasemva, kwesinye sadibana nayo kwi-conservatory. Xa baqulunqa into, baba ngabokuqala bokuphulaphula, kwaye ndiyayixabisa ngokwenene.
Ingxoxo enomdla nomculi uJamala waphumelela.
UJuda Law: I-Biography
UMikhail Politseymako, umlingisi, i-biography
I-Dean Reed: i-American most Soviet
Natalya Vodyanova nomyeni wakhe
Umdlali omncinci uMaria Mashkova
Jolie noThannton - kunye kwakhona?
Iimpawu zonyango lwefowuni
Amakheke "Faka iziqhamo"
Umongikazi we-oncologist wabhala incwadi malunga noJeanne Friske
Inkukhu ebhakawa ngamakhowe kunye nompu
Isondlo esifanelekileyo njengendlela yokunciphisa umzimba
Unyaka omtsha: izimvo kulabo abaya kubhiyozela
Ukunciphisa i-cholesterol kwiimpawu zamalungu egazi
Ukusetyenziswa kokukhulelwa komzimba kuthintela njani ukukhulelwa kwangaphambili?
Ziziphi ezinye iimveliso eziza kuphakama kwixabiso ngenxa yezigwebo?
Ukunakekelwa kwexesha kunye nesikhumba
Umsunguli wesitayela - uDavid Bowie
USergei Lazarev wacaphukisa isithunzi somntu kunye namadoda
Isobho seCream ukusuka ku-arugula
Yintoni enokuyinika intombazana evela kwi-perfume
Imfundo yaseplasini kunye nezikolo - zeziphi abazali abafuna ukuzazi